मृत्युको सङ्ख्या २ नै हो, थप २५ जनामा संक्रमण, संक्रमित हुनेको सङ्ख्या ४२७, ३८ जिल्ला पुग्यो (पुरा विवरण)
By administrator on	 May 20, 2020 कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, स्थानीय, स्थानीय तह
जेठ ७ । गुल्मीका एक कोरोना भाईरस संक्रमित व्यक्तिको कपिलवस्तुमा मृत्यु भएको भन्ने समाचार सत्य नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिले पनि भेन्टिलेटरमा रहेको बताउनुभयो । सञ्चार माध्यममा यसअघि उहाँको निधन भएका समाचार आएका थिए । यस्ता भ्रामक समाचार नदिन पनि उहाँको आग्रह छ ।
आज मात्रै नवलपरासी पश्चिममा एकजना, बाँके, धनकुटा र कपिलवस्तुमा गरि थप २५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
पश्चिम नवलपरासीमा बुधबार पुष्टि भएका एक जना कोरोना संक्रमित नेपालभारत अतिक्रमित क्षेत्र सुस्ता हुँदै नारायणी नदीमा डुंगा तरेर नेपाल आएको खुलेको छ । उनी भारतको मुम्बईबाट बैशाख ३० गते भारत विहारको बसही हुँदै नारायणी नदी पारीको सुस्ताबाट डुङ्गाको प्रयोग गरी सुस्ता गाउँपालिका–५ बेलवनीमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बस्न आएका थिए । पश्चिम नवलपरासीका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार सुस्ता गाउँपालिका वडा नं ५ बेलवानीका २६ वर्षका १ जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो ।
यो सँगैं नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) बाट संक्रमित हुनेको सङ्ख्या ४२७ रहेको छ ।
पुरुष ३५८ जना रहेका छन् भने महिला ६९ जना रहेका छन् । हालसम्म निको भएर घर फर्किएकाको सङ्ख्या ४५ रहेको छ । २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
३८ जिल्लामा यसको संक्रमण देखिएको छ ।
प्रदेश नम्बर १ मा ५९ जनामा संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा १ सय ३६ जनामा यसको संक्रमण देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा १ जनाको मृत्यु सहित २६ जना संक्रमित छन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ४ जना संक्रमित छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा १ जनाको मृत्यु सहित १ सय ९६ जनामा कोरोना भाईरसको संक्रमण देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा १ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ५ जनामा संक्रमित रहेका छन् ।
अबदेखी तोकिएका अस्पतालहरुमा शःशुल्क रुपमा तोकिएको दर रेटमा कोरोना परिक्षण गर्न सक्ने गरि व्यवस्था मिलाईएको र सो सम्बन्धी नीति पारित गरिएको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले महामारीको यस संकटमा तोकिएको दर रेटका विषयमा अर्नगल प्रचारबाजी नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।